Kvarner: Mahafinaritra ny fahasamihafana
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Kvarner: Mahafinaritra ny fahasamihafana
Malaza amin'ny famokarana mpilalao tenisy kilasy eran-tany i Kroasia. Mety noho izany, nandritra ny tapa-bolana tany Wimbledon, ny klioban'ny Queen's London, izay tompon'andraikitra amin'ny fifaninanana tenisy ahitra malaza indrindra eran-tany, no voafidy hampiroborobo ny fizahantany any Kroasia. Ny fampisehoana nataon'ny Birao fizahantany Kroaty dia nampahafantatra ireo vahiny ny manintona ny faritra iray manokana - Kvarner, izay mampiroborobo ny tenany amin'ny teny filamatra: Mahafinaritra ny Diversity.
Any amin'ny zoro avaratry ny Adriatika Kroaty dia Kvarner dia faritra iray izay manohina ny fon'i Eropa ny tendrombohitra Mediteraneana miaraka amin'ireo tendrombohitra any avaratra, nosy atsimo, morontsiraka be vato atsinanana ary saikinosy lehibe iray any atsimo. Ny lova ara-kolontsaina manankarena dia namboarin'ireo fitaomana avy any Atsinanana sy Andrefana. Ilay tontolo mahavariana miaraka amin'ny tsangambato ara-tantara sy ara-kolontsaina marobe sy tranokala no nahatonga an'i Kvarner ho toerana tian'ireo mpizahatany rehetra tsy jerena na firy taona na firy. Miaraka amin'ireo torapasika miafina sy ny coves ny faritra dia mety ho an'ireo izay maniry ny ho eo amoron-tsiraka. Afaka milomano ianao, miondrana an-tsambo na mandeha mitsangantsangana mba hijery ireo feso feso izay nahatonga ny tranony tao anaty rano manodidina. Ny nosy Cres dia mahafinaritra manokana miaraka amin'ny karazan-javamaniry ahitra 120 mahery.
Terrace mijery ny kianja filalaovana tenisy ao amin'ny Queen's Club / Sary © Rita Payne
Rehefa tonga any amin'ny morontsiraky ny tanibe ianao dia afaka mitsangantsangana amin'ireo lalana mamaky ny ala maitso any Gorski Kotar hatrany amin'ny National Park Risnjak - iray amin'ireo onenana tsy dia fahita firy any Eropa izay ahafahanao mahita maso lynx sy bera volontany. Safidy iray hafa ny fitsangatsanganana an-bisikileta manerana ny kilometatra amoron-dàlana marobe manolotra fahitana mahatalanjona amin'ireo tandavan-tendrombohitra midina mankany amin'ny ranomasina ambany. Raha mila zavatra sarotra kokoa ianao dia afaka manandrana miakatra an-tendrombohitra. Amin'ny andro mahazatra dia afaka manomboka amin'ny hazakazaka amin'ny tendrombohitra ianao ary mifarana eo amin'ny tokotanin'ny sambo an-tsambo miaraka amin'ny onjan'ny ranomasina manodidina anao.
Ireo tia zavakanto sy maritrano dia hahita zavatra be mpitia ao an-tanànan'i Rijeka ao afovoan'i Kvarner: Art Nouveau, Baroque voaravaka ary Venetian Gothic. Ny tanàna dia manana vatosoa miavaka maritrano noforonin'ny tompona Viénese, hongroà ary italianina malaza. Betsaka ny tranombakoka sy galeria azo tsidihina. Ao amin'ny lapan'ny Opatija dia mbola tsy tratry ny olona avy any Strauss ny aingam-panahin'i Strauss izay aingam-panahin'ny baolina Viennese malaza.
Mpihira Kroaty manao fampisehoana ao amin'ny Queen's Club / Sary © Rita Payne
Mozika sy fety
Ireo tanora mitady hetsika sy fialamboly dia afaka mankany amin'ny kianjan'i Rijeka, bara, terraces ary klioba amoron-dranomasina handihizana na handentika azy ireo amin'ny mozika. Averina indray fa ny fahasamihafana no teny fototra. Na miditra amin'ny mozika elektronika, jazz na rock ianao, dia hahita zavatra mifanaraka amin'ny tsironao. Ny orinasa iray mpanao taratasy taloha dia mandray ny iray amin'ireo fety kely eropeana malaza izay iarahan'ny kolontsaina lova sy ny pop ao anaty firindrana tanteraka.
Misongadina iray hafa ihany koa ny Karnavaly Rijeka malaza eran-tany, izay mpiantso lakolosy, misolo tena ny mpitondra hafatra amin'ny lohataona, mitafy volon'ondry sy manao sarontava, mandroaka ny demonia amin'ny ririnina. Ny hetsika fanao isan-taona dia nahazo laza ho iray amin'ireo karnavaly lehibe indrindra any Eropa. Isan-taona dia mpizahatany an'arivony no midina eto an-tanàna hankafy ny fety, ny filaharana ary ny dihin'ny vahoaka. Ny tanàna hafa koa dia lasan'ny foara sy ny festival. Amin'ireny fotoana ireny dia feno olona mitafy olo-manan-kaja, tantsaha, mpanao asa tanana, mpanjono ary mpamosavy mihitsy aza ny arabe.
Ny sakafo sy ny zava-pisotro dia tsy mitovy. Azonao atao ny mitsidika tavernas nentim-paharazana izay iarahan'ny mpampiantrano ao an-toerana mizara mofo vao avy namboarina, fromazy osy, menaka oliva, hazandranomasina matsiro izay natolotra niaraka tamin'ny divay avy tao an-toerana. Ny specialities isam-paritra dia misy scampi, foza, horita ary mussel natono na nandrahoina saosy marefo miaraka amin'ny voatabia, divay fotsy ary tongolo lay. Ho an'ny trano fisakafoanana mihantona mahaliana kokoa noho ny lanilany, manolora nahandro iraisam-pirenena ambony kalitao.
Fidirana eo anilan'ny fitsarana Queen's / Sary © Rita Payne
Ny faritra Kvarner dia mora azo avy amin'ny faritra rehetra any Eropa. Sidina adiny roa avy any Londres izy io. Ny mpitsidika dia afaka mitondra fiara any ora vitsivitsy avy any Italia, Aostria, Slovenia ary Alemana. Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena efatra no manompo azy. Raha vantany vao tonga mandehandeha ianao dia tsy misy fanaintainana. Raha tsy manana fiara ianao dia tsara ny tambajotram-bus ary mampifandray ny tanibe amin'ireo nosy ireo sambo sy catamarans. Lalam-by tsara iray mampitohy an'i Kvarner amin'ny sisa tavela any Kroasia.
Kvarner mirehareha amin'ny fahasamihafana misy eo aminy. Azonao atao ny milentika amin'ny hafanan'ny Mediteraneana na mahazo hery avy amin'ny rivotra madio sy madio an'ny Ucka Mountain sy Gorski Kotar. Azonao atao ny mankafy ny sakafo isan-karazany any amin'ny faritra ary mizaha ireo toerana manan-tantara. Ho an'ireo mitady zavatra milamina kokoa dia azonao atao ny manoratra any amin'ny spa resort. Raha manintona anao ny fahafinaretan'i Kvarner ary manapa-kevitra ny handeha any ianao ary hijery ny sisa tavela amin'i Kroasia dia mety ho fantatrao ny tsiambaratelon'ny antony namokaran'ny mpilalao tenisy kintana marobe an'ity firenena ity.
làlana fanitarana airberlin mankany Etazonia
Nihemotra ny fandriampahalemana IIPT tamin'ny alàlan'ny Konferansa fizahantany